Maitiro ekujekesa Safari nhoroondo uye data pane iOS | IPhone nhau
Maitiro ekujekesa Safari nhoroondo uye data pane iOS
Pese patino tarisa pa internet, zvisinei nekuti tinoita kuburikidza nharembozha yedu kana kuburikidza nePC kana Mac, bhurawuza ratinoshandisa. inochengeta nhoroondo yeese mawebhusaiti atakashanyira pamusoro pekuchengetedza iyo data yechiitiko chatakaita.
Ruzivo urwu, zvinoenderana nekwatinofamba kubva, runogona kuve dambudziko, nekuti mune mamwe mabasa, bhurawuza rinogona kungoshandiswa chete pazvinhu zvebasa uye pasina nyaya yezvimwe zvinhu. Nharembozha inochengetedzawo nhoroondo imwechete, nhoroondo iyo Muzviitiko zvese izvi tinogona kudzima zviri nyore.
Kana isu tapera bhatiri mune yedu kifaa uye isu taifanirwa kuenda kushamwari kuti tiite yekutsvaga, zvinowanzoitika kuti usati waisiya, bvisa iyo nhoroondo nedata rauinaro muSafari, kana isu tiri kutaura nezvazvo i iPhone, basa rinokurudzirwa hacer kana tangodzosera chishandiso kumuridzi wayo kana tangoita kutsvaga kwataida, chero bedzi tisingade kuti shamwari yedu izive kuti ndeipi peji ratakashanyira uye kuti ndeapi data atapinda.
Bvisa kubhurawuza nhoroondo uye data muSafari yeIOS
Mukati meZvirongwa, tinotsvaga Safari uye tinya nayo.
Mukati meiyi menyu sarudzo dzese dzatinogona kuita neiyo iOS browser dzinoonekwa. Isu tinoenda kuChenesa nhoroondo uye dhata rewebhusaiti.
Nekudzvanya pane iyi sarudzo, positi yekusimbisa inozoratidzwa ichitizivisa isu kuti iyo nhoroondo, makuki uye imwe data yekubhurawuza ichadzimwa, pamusoro pekudzima nhoroondo yezviridzwa zvakabatana neICloud account yako.
Kana isu tikakumbira iyo iPhone yeshamwari uye isu tisingade kusiya trace, sarudzo yakanakisa pane kuti ubvise nhoroondo nedata kuita kutsvaga kwega, kuitira kuti pasawane trace inoponeswa pachigadzirwa kana tavhara iyo Safari tebhu yashandiswa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekujekesa Safari nhoroondo uye data pane iOS
Apple inopomerwa kubiridzira kwevana kuwana cobalt yemabhatiri ayo
Mutongi anodzivirira Samsung kubva pakutengesa nhare dzekare dzinokanganisa Apple patent